Call for Applications: Preparation Program for Exportation and European Market Readiness – Impact Hub Yangon
Call for Applications: Preparation Program for Exportation and European Market Readiness
မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုဗစ်-၁၉နှင့် လတ်တလော အခြေအနေများ ကြောင့် အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် အလွန်ခက်ခဲသော အခြေအနေများနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိပါတယ်။ ထိုအခြေအနေများကြောင့် စီးပွားရေးအခင်းအကျင်းများ ပြောင်းလဲလျက်ရှိပြီး လက်ရှိပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်များမှာလည်း အခက်အခဲများကြုံတွေ့ရလျက်ရှိပါတယ်။ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများမှာလည်း ရေရှည်ဆက်လက်ရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် စိန်ခေါ်မှုများဖြစ်သော ဈေးကွက်ရှာဖွေရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များ ကျိုးပျက်ခြင်း၊ ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေသော ပြဿနာများနှင့် ငွေကြေးမတည်ငြိမ်သော ပြဿနာများ အစရှိသည်တို့ကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရလျက်ရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသော အခက်အခဲများကြားမှာ ဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ရန်နှင့် ရေရှည်တည်တံ့နိုင်ရန်အတွက် အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများသည် ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အသစ်များကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန် ဈေးကွက်အသစ်များ ရရှိစေခြင်း စသည့် အမျိုးမျိုးသော ထောက်ပံ့ကူညီမှုများကို လိုအပ်လာပါတယ်။
ထို့ကြောင့် Impact Hub Yangon သည် FNF Myanmar နှင့်ပူးပေါင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းများကို ၄င်းတို့ရဲ့ ထုတ်ကုန်များ ပြည်ပသို့တင်ပို့နိုင်ရန်၊ ဉရောပရှိ ဈေးကွက်သို့ ဝင်ရောက်နိုင်သည့် အလားအလာကောင်းများ ရရှိရန်နှင့် စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် “Preparation Program for Exportation and European Market Readiness” အစီအစဉ် ကိုယူဆောင်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပရိုဂရမ်တွင်ပါဝင်ခွင့်ရရှိသူများသည် ပြည်ပဈေးကွက်ဖြစ်သော ဉရောပဈေးကွက်ကို ထိတွေ့ နိုင်မည့်အခွင့်အရေး ရရှိနိုင်ခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးနယ်ပယ်များမှ ပညာရှင်များ၏ ပို့ချမှုများဖြင့် မိမိတို့ရဲ့ စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရည်တိုးတက်မှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်မည့် ရောင်းဝယ်ခြင်း၊ ဈေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်း၊ အမှတ်တံဆိပ်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် အခြားသော စီးပွားရေးတိုးတက်မှု အတွေ့အကြုံများကို လေ့လာခွင့်ရန်ိုင်ခြင်း၊ ဂျာမနီတွင်ပြုလုပ်မည့် အတွေ့အကြုံဖလှယ်သည့် အစီအစဉ်ကို တက်ရောက်ခွင့်ရနိုင်ခြင်း အစရှိတဲ့ များစွာသော အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မိမိလုပ်ငန်းမှာ အသေးစား၊ အငယ်စားနှင့် အလတ်စားလုပ်ငန်းတစ်ခုခုဖြစ်ပြီး ပြည်ပဈေးကွက်သို့ တင်ပို့နိုင်တဲ့ ထုတ်ကုန်များ ပိုင်ဆိုင်ထားခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြည်ပဈေးကွက်သို့ လက်ရှိမှာ ကုန်ပစ္စည်း တင်ပို့နေတဲ့ လုပ်ငန်းတစ်ခုခု ဖြစ်ပါက မေလ (၉) ရက်နေ့၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊ ၂၀၂၂ မတိုင်ခင် အောက်ဖော်ပြပါလင့်ခ်မှာ ဝင်ရောက်လျှောက်ထားဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။
လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ် (သို့မဟုတ်) ပရိုဂရမ်နှင့် ပက်သက်ပြီး သိရှိလိုပါက ဖုန်း (ကိုဘုန်းမြတ်ကျော် – ၀၉ ၉၇၃၄၇၄၁၄၁)၊ (မသဇင်ထွဋ် – ၀၉ ၉၆၃၂၈၇၉၁၂) (သို့မဟုတ်) အီးမေးလ် yangon@impacthub.net သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
SMEs in Myanmar are currently facingadire situation caused by the compounded crisis, COVID-19 and current situations. Asaresult, the economic landscape has changed and the existing markets of both local and international markets have become extremely risk averse. SMEs themselves face serious challenges even to survive including contracting markets, broken supply chains, liquidity challenges, inflations and so on. To survive or be resilient from the current crisis, SMEs need diverse support such as new market access to meet new market demands.
Hence, Impact Hub Yangon in collaboration with FNF Myanmar would like to implement “Preparation Program for Exportation and European Market Readiness” to support Myanmar SMEs to have readiness for exportation and potential European market access as well as to enhance their business capacities for growth.
The participants will get an opportunity to expose themselves with the international market access focusing on the European Market, to receive business capacity development such as sales, marketing, branding and business development experiences from the relevant experts from the respective business sectors, to winachance to visit Germany for field visit and exchange program and finally to earn the opportunity to get involved in the program.
If you are an SME with exportable products or already have existing exportations, apply the program before May 29 (Sunday) 2022 in the following link:
Application Link: https://bit.ly/PreparationProgramforExportationandEuropea…
If you have any questions about the application process or the program, please reachout to (Ko Bhone Myat Kyaw – 09 973474141), (Ma Thazin Htut – 09 963287912) or send an email to yangon@impacthub.net
Previous Falling Walls Lab Myanmar is now calling applications for 2022!
Next Myanmar Thingyan New Year Holidays Announcement!
09 973474141, 09 774300551
Open for Applications | Falling Walls Lab Myanmar
The Applications are being reviewed by the Selection Committee!
Cartier Women’s Initiative | Calling Women Entrepreneurs, Innovators and Social Change Makers!
MCHS isalocally formed non-profit, non-political, and non-governmental organization whose aim is to serve the people of Myanmar to improve their physical, mental, and social well-being. A group of founding members believes that improving the influential determinants of healthy communities requires equal leadership and meaningful involvement of different professionals.
Facebook Page: MCHS
Po Po isapassionate, creative and friendly colleague who is currently working as the Community & Event Coordinator at Impact Hub Yangon. As an Community & Event Coordinator, she is supporting mainly in the day to day communication and convenient implementation of monthly entrepreneurship related community events of Impact Hub Yangon. Po Po graduated withaBachelor of International Relations (Hons) from University of Yangon. Before joining Impact Hub Yangon, Po Po has experiences working at International Organizations like ActionAid Myanmar as well as Global Platform Myanmar in assisting campaigns, facilitating workshops and implementation of youth talk show series that contributed to the community development. Moreover, she also has previous experiences of joining international workshops and conferences in Cambodia and Kenya respectively. In her free time, she likes to go travelling as well as documenting and photographing the different traditions and cultures of different people. As she is passionate for community development, she enjoys working with Impact Hub Yangon team together in implementing activities that create social and economic impacts.